Kalandarka Qorraxda: waa maxay, sifooyinka iyo asalka | Shabakadda Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 23/11/2021 16:00 | Ciencia
Dhammaanteen waxaan u barannay raacitaanka jadwalka qoraxda laakiin dad badan ma oga halka ay ka timid iyo waxa ay ka dhigan tahay. Marka laga soo tago in uu yahay kalandarka aan ka dhex heli karno noocyo kala duwan, waxaa cad in uu ka duwan yahay kalandarka dayaxa. Waxay leedahay astaamo u gaar ah oo ay mudan yihiin in halkan lagu xuso.
Sidaa darteed, waxaan maqaalkan u hurayn doonaa inaan kuu sheegno jadwalka qorraxdu waa maxay, asalkiisa iyo dhammaan sifooyinka ugu muhiimsan ee uu leeyahay.
1 Waa maxay jadwalka qorraxdu
2 Noocyada jadwalka qoraxda
2.1 Jadwalka qoraxda kulaylaha
2.2 Jadwalka qoraxda ee dhinaceeda
3 Kala duwanaanshaha kalandarka dayaxa
Waa maxay jadwalka qorraxdu
Kalandarka qorraxdu waa kalandarka xukuma nolosheena. Waa nidaam shukaansi oo ku salaysan sannad xilliyeedka qiyaastii 365 1/4 maalmood, kaas oo waa wakhtiga ay qaadanayso in dhulku ku wareego qorraxda.
Masaaridu waxay u muuqdeen kuwii ugu horeeyey ee horumariya jadwalka qoraxda. Dib-u-soo-noolaanshaha Ey-Sirius (Sothis) ee cirka bari waxay ahayd meel go'an sannad kasta, oo ku beegan fatahaadda Niil ee sannadlaha ah, waxay sameeyeen jadwalka 365 maalmood. Waxay ka kooban tahay 12 bilood, 30 maalmood bishii, iyo 5 maalmood oo lagu daray dhammaadka sannadka, taas oo sababtay in jadwalkiisu uu si tartiib tartiib ah u xumaado.
Ptolemy III Euergetes ee Masar ayaa maalin ku daray jadwalka aasaasiga ah ee 365-maalin afartii sanaba mar xeerkii Canopus (237 BC) (dhaqankan waxa kale oo la soo galiyay jadwalka Seleucid ee la ansixiyay 312 BC).
Jamhuuriyadda Roomaanka, Imbaraadoor Kaysar sannadkii 45 BC. Waxaa lagu beddelay kalandarka jamhuuriyadda Roomaanka ee fowdada ah ee kalandarka Julian, kaas oo laga yaabo inuu ku salaysnaado jadwalka dayaxa ee Giriigga. Kalandarka Julian wuxuu dhigayaa 30 maalmood ama 31 maalmood ilaa 11 bilood illaa Febraayo; sanadka boodboodka waxaa la ogolyahay afartii sanaba mar. Si kastaba ha ahaatee, ka dib, jadwalka Julian wuxuu sameeyay sanadka qoraxda aad u dheer isagoo ku daray rubuc maalin ah sanadka; Sannadka qorraxdu dhab ahaantii waa 365.2422 maalmood.
Badhtamihii qarnigii 10aad, wakhtiga dheeraadka ahi waxa uu keenay khalad wadar ah oo ku dhawaad ​​1582 maalmood ah. Si loo saxo khaladkaas, Pope Gregory XIII waxa uu sameeyay kalandarka Gregorian sannadkii 5, laga bilaabo Oktoobar 14 ilaa 400 ee sannadkaas, waxana uu meesha ka saaray sannadaha boodada sababtoo ah waxay ka tirsan yihiin boqol sano oo aan la qaybin karin 1700, tusaale ahaan, 1800, 1900 iyo XNUMX. Dhammaan sharraxaadaha, waxaan aragnaa in noocyo kala duwan oo kalandarka qoraxda ay soo baxeen, oo sidoo kale lagu calaamadeeyay goobta. Kalandarka Gregorian-ka hadda waa kalandarka Gregorian, laakiin ma dhibayso haddii aan ogaano waxa ay yihiin jadwalka kale ee Gregorian.
Noocyada jadwalka qoraxda
Jadwalka qoraxda kulaylaha
Jadwalka qoraxda kulaylaha ah waa kalandarka ay xukumaan sanado kulaylaha, mudadasuna waa ku dhawaad ​​365 maalmood, 5 saacadood, 48 daqiiqo iyo 45 ilbiriqsi (365,24219 maalmood). Sannadka kulaylaha waxa uu noqon karaa laga bilaabo gu'ga ama dayrta siman ee siman ilaa kan xiga, ama laga bilaabo xagaaga ama jiilaalka solstice ilaa kan xiga.
Inkasta oo kalandarka Gregorian-ka ee maanta uu leeyahay 365 maalmood sannadkii caadiga ahaa, waxaan ku darnaa maalin boodbood ku dhawaad ​​afartii sanaba mar si aan ula jaanqaadno sanadka kulaylaha. La'aanteed tirada saxda ah ee sanadaha boodboodka, kalandarkayagu si dhakhso ah ayuu uga bixi doonaa isku-xidhka. Tani waxay ku dhacdaa jadwalka Julian oo leh sannado boodi oo aad u badan. Ugu dambayntii, waxa lagu beddelay kalandarka Gregorian.
Kuwa soo socda waa kalandarka qoraxda kulaylaha:
Jadwalka Iiraan (Jal_li Calendar)
Jadwalka qoraxda ee Thai
Mid kasta oo ka mid ah jadwalkan wuxuu leeyahay sanad 365-maalmood ah waxaana mararka qaarkood la ballaariyaa iyadoo lagu darayo maalin dheeraad ah si loo sameeyo sanad boodbood. Habkan waxaa loo yaqaan "collation", halkaas oo taariikhaha la geliyey ay yihiin "si tartiib tartiib ah". Sidoo kale, waxaa jira jadwalka Zoroastrian, kaas oo Waa jadwal diini ah oo loogu talagalay dadka cibaadaysanaya ee Zoroaster waana qiyaas kalandarka qoraxda kulaylaha.
Jadwalka qoraxda ee dhinaceeda
Kalandarka Bengali waa tusaalaha ugu fiican ee jadwalka qoraxda xiddigaha. Tani badanaa waa 365 maalmood, oo lagu daray hal maalin si loo sameeyo sanad boodbood. 12-ka bilood ee qoraxda waxaa loo aqoonsaday mid ka mid ah lixda xilli (laba bilood xilli kasta). Bil kasta waxay u taagan tahay koox koox gaar ah.
Jadwalka noocan ah Waxaa loo isticmaalaa faal iyo macne muhiim ah oo diimaha kala duwan. Kalandarkani wuxuu kaloo isticmaali karaa bisha dayaxa. Sidaa darteed, kalandarka Bengali waxaa sidoo kale loo yaqaan kalandarka dayaxa-qorraxda.
Kuwa soo socda ayaa ah jadwalka qoraxda ee sidereal:
Kala duwanaanshaha kalandarka dayaxa
Waxaan soo aragnay sida jadwalka qorraxdu uu ku salaysan yahay dhaqdhaqaaqa qorraxdu oo ay aad u yaqaanaan dadka. Laakiin ma aha jadwalka kaliya, inkastoo ay tahay in aan sidoo kale ka hadalno jadwalka dayaxa, kaas oo waxaa lagu maamulaa wejiyada kala duwan ee dayaxa. Sidan oo kale, kalandarka qorraxdu aad ayuu uga duwan yahay kalandarka dayaxa, kaas oo dayaxa u isticmaala xisaabinta bilaha. Inkasta oo labada jadwal ay isticmaalaan habab kala duwan si ay u cabbiraan bilaha, labaduba waxay naga caawin karaan inaan si sax ah u ogaano waqtiga iyo maaraynta nolosheena.
Dhanka kale, farqiga ugu cad cad ee u dhexeeya kalandarka dayaxa iyo kalandarka qorraxdu waa meeraha samada ee loo isticmaalo cabbirka socodka waqtiga. Jadwalka dayaxa waxa uu isticmaalaa marxaladda dayaxa si loo cabbiro wakhtiga. Guud ahaan, bil waa waqtiga u dhexeeya bisha cusub iyo dayax cusub. Waqtiga loo baahan yahay in dhulku ku wareego qorraxda waa hal sano oo qoraxda ah.
Jadwalka qorraxdu inta badan waxa uu cabbiraa wakhtiga u dhexeeya isu-dheellitirka vernal equinoxes. Sababtoo ah dayaxu wuxuu qaataa waqti isku mid ah inuu ku wareego dhulka, dayaxu wuxuu had iyo jeer muujiyaa weji isku mid ah dhulka. Taasi waa sababta darafkeeda kale aan weligeed loo arkin. Dayaxyada cusub waxay soo baxaan 29,5 maalmood kasta. Xiddig-yahannadu waxa ay wakhtiga u dhexeeya bilaha cusub ugu yeedhaan dayax synodic ah.
Dhammaan jadwalka dayaxa ee ay dadku abuuraan waxay ku saleysan yihiin bilaha synodic, maaha bilaha aan ka heli karno jadwalka qoraxda. Dhab ahaantii, kalandarka qoraxda ayaa loo sameeyay sidii bil ah oo aan sida caadiga ah u isticmaalno si joogto ah, oo ka duwan jadwalka dayaxa, kaas oo Waxaa inta badan loo isticmaalaa dalagyada iyo maadooyinka esoteric.
Sida aad arki karto, waxaa jira farqi badan oo u dhexeeya jadwalka dayaxa iyo qorraxda. Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto jadwalka qoraxda, sifooyinkeeda iyo asalkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Kalandarka qoraxda